Dhaabbileen mirga namoomaafi itti-gaafatamummaa isaanii - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, KOMISHIINII MIRGA NAMUMMAA ITOOPHIYAA
Mirgoota namommaa jechuun dhalli namaa waan nama ta'e qofaaf mirga uumamaa argatu yoo ta'u mirgoota eeggamuufi kunuunfamuufii qabaniidha.
Kunis adda addummaa saalaan, gosaan, aadaan, amantiin, ilaalchaan, afaaniin yookiin adda addummaa kamiinuu mirgoota dhorkamuu hin dandeenyedha jedha Dhaabbanni Mirgoota Namoomaa Mootummoota Gamtoomanii.
Namni tokko gaafaa dhalatu kennaa waaqni naa kenne yookiin namni amantii hin hordofnes kennaa uumamni isaa kenne ta'uu danda'a, kanaafuu mirga lubbuun jiraachuu qaba jechuu dandeenya, jedhu Dr Daani'eel Baqqalaa Komishiinarri Komiishiinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa.
Mirgi namoomaa lammiilee ofiisaaniitiin yookiin mootummaa biyya saniitiin eeggamu yookiin kunuunfamu.
Lammiilee ofiisaaniitiin mirga namoomaasaanii kabachiisuuf mirgas dirqamas qabu, jedhu Dr Daani'eel.
Gama biraatiin ammoo mootummaan mirgoota namoomaa lammiileesaa kabajuufi kabachiisuuf itti gaafatamummaa qaba, jedhu Dr Daani'eel.
'Gabaasni Komiishinii mirga Namoomaa Itoophiyaa loogii qaba'
Itoophiyaan falmaa mirga namoomaa gameessa muudde
"Mootummaan mirgoota namoomaa ofiisaatii dursee kabajuu qaba. Kana jechuun mootummaan seeraan ala mirgoota namoomaa lammiileesaa dhiibuu dhabuuf dirqama idil-addunyaa guutamuu qabu.
Inni lammaffaan ammoo mootummaan mirgoota namoomaa lammiileesaa kabachiisuu qaba. Mootummaan mirgoota namoomaa qofa osoo hin taane mirgootaafi itti gaafatamummaa kaanis kabachiisuuf dirqama qaba," Dr Daani'eel Baqqalaa.
Lammiileenis mirgoonni isaanii akka kabajamuuf fedhiisaaniitiin qaama filataniif itti gaafatamummaa kan kennan qaama mootummaa jedhamuuf jechuun, dubbatu Dr Daani'eel.
Gaaffii BBC'n yoo qaamni mootummaa jedhamu kan mirgoota namoomaa kabajuufi kabachiisu mirga san sarbe hoo lammiileen akkamitti mirga jalaa sarbame san kabachiifatu jedhuuf Dr. Daani'eel akkas jedhaniiru:
"Qaamonni seera kana kabachiisuuf itti gaafatamummaa qaban kan akka poolisii, qaamolee nageenyaa, abbaa alangaa, mana murtiifi k.k.f qaamolee gargaraatu jiru.
Kunneenis qaama mootummaa keessatti seeronniifi mirgoonni akka kabajamu qaamolee itti gaafatamummaa qabaniidha."
Qaamolee dimookiraasii biroos kan akka komishiinii mirga namoomaa, waldaalee siivikii, miidiyaaleefi kan biroos ni jiru.
Ta'us garuu, itti gaafatamummaa guddaa kan fudhatu mootummaadha jedhu Komishiinar Dr Daani'eel.
Qaamni mootummaa tokko yoo itti gaafatamummaasaa haalaan hin raawwanne qaamni mootummaa kan biroo dhimmasaa gaafachuufi hordofuu ni danda'a jechuun ibsu Dr Daani'eel.
"Caasaa mootummaa biyya tokkoo keessatti sirni 'Check and balance," jedhamu ni jira.
Kunis qaamni mootummaa tokko yoo balleesse qaama mootummaa isa kaaniin to'atama jechuudha.
Komishiiniin mirga namommaa Itoophiyaas sarbamni mirga namoomaa yoo raawwatame qaama itti gaafatamummaa kallattii qabuudha.
Komiishiinichi asiin dura rakkoo siyaasaan walqabatee dhiibbaa mootummaarraa bilisa kan hin turreefi amma garuu of haaromsuuf hojiilee muraasa hojjachaa akka jiru Dr Daani'eel Baqqalaa Komiishinarri komishiinichaa BBC'tti himaniiru.
Dabalataanis ammatti dhiibbaa mootummaarraa dhufu kamuu akka hin jirre ni dubbattu.
Jiraatus waajjirri isaanii akka hin fudhanneefi isaaniis ammoo akka hoogganaa waajjirichatti dhiibbaa mootummaarra dhufu kamuu fudhachuuf qophii akka hin taane dubbattaniiru.
Sarbamni mirgoota namoomaa biyya tokko keessa jiru yoo seera biyya saniin ol ta'e seera idil-addunyaatiin ilaallama.
Fakkeenyaaf, dhiitamuu mirga namoomaa biyya tokkoo yoo seeraafi humna biyyasaniin ol ta'e dhaabbilee dhimma mirga namoomaa idil-addunyaatiin hordofama, jedhu Dr Daani'eel yeroo dhiitamuun mirga namoomaa humna biyya tokkootiin ala ta'e.
Dhaabbileen mirga namoomaarratti akka ardii Afrikaafi Idil-addunyatti hojjattan keesssaa muraasni:
Komiishiinii Mirgoota Namoomaa Afriikaa
Mana Maree Mirgoota Namoomaa Addunyaa
Komiishinarii Ol'aanaa Mirgoota Namoomaa
Mana Murtii Idil-addunyaa (ICC)
Mirga Namoomaa: Mootummaan namoota miidhe kiisuu qaba
Aministii Intarnaashinaal: Gabaasni Komiishinii mirga Namoomaa Itoophiyaa loogii qaba
14 Ebla 2021
'Taateen tibbana Chaaginiitti mudate yaaddoo nutti umeera'- jiraattota
Raashiyaan Yukireen weeraruuf qophiirra jirtii?
Facebook fuula magaalaa Faransaay 'Bitche' jedhamtu haqe
Mootota dubraa 'TikTok' Itoophiyaafi carraa miidiyaan hawaasaa kun uume
Jawaarfaa falmii 'ragaan golgaa duubaanimoo ifatti' jedhu pilaazamaan akka hordofan murtaa'e
Aduwaatti 'dhukaasa loltoota Ertiraan' lubbuun namootaa dabre